Qaadashada Viisayaasha Xajka Ee Sacuudi Caraabiya Oo la bilaabay | Afrikada
Qaadashada Viisayaasha Xajka Ee Sacuudi Caraabiya Oo la bilaabay
Jul 27, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Muqdisho: Waxaa si rasmi ah loo bilaabay bixinta Dal-Ku Galka (Visas) lagu aadayo wadanka boqortooyada Sacuudiga.
War ay si toos ah u soo saartay wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in haatan uu diyaar yahay viisaha lagu aadayo xajka.
Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay xilliga la qaadan karo viisaha Sacuudiga oo ah Toddobaadka soo socda goortaasi oo ay wasaaraddu Xujeyda safraya u bilaabeyso nidaamka waraaqaha Xujeyda Soomaaliyeed.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna sii hayaha xilka wasiirka mudane C/xakiin Xasan Ibraahim (Ashkir) ayaa warbaahinta ku hadasha codka dowladda u faahfaahiyey in waqti xaadirkan ay wasaaraddu gudaneyso waajibaadkeeda ah sidii Xujeyda Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa waraaqahooda sannadka.
Waxa kale oo uu Cabdi-Xakiin tilmaamay in uusan haatan jirin wax caqabad ah oo arrimaha Xajka ku saabsan laguna guuleystay in laga gudbo dhibaatooyinkii hore looga ashtakoonayey, isaga oo sheegay i shirkadihii howlgalayey la kordhiyey oo ay hadda yihiin 5 shirkadood oo loo idmaday in ay howsha fududeeyaan.